HS:- Kulan ay soo qaban qaabiyeen gudiga jaaliyada Hiiraan ee dalka Norway ayaa lagu qabtay magaalada Oslo ee dalka Norway kaasi oo ay ujeedadiisu aheyd sidii ay iskugu xirmi lahaayeen qurbajoogta Hiiraan.
kulankan oo ahaa mid horudhac u ah kulamo kale oo ka dhaci doona qaarada yurub ayey hadane dhamaan dadkii ka soo qeybgalay waxey si qoto dheer uga hadleen muhiimada ay leetahay wadajirka iyo ka shaqeynta midnimada guud ee dalka.
Intii uu kulamku socday ayaa waxaa sidoo kale lagu taageeray guulaha ay maamulka gobolka Hiiraan,ciidamada xooga dalka iyo kuwa Amisom ee Hiil Walaal ka geysteen degaanadii dhawaan lagala wareegay kooxda Shabaab iyo xulufadooda.
Sidoo kale waxgaradkii halkaas ka hadlay oo iskugu jiray aqoonyahano, saraakiil, culimo, iyo siyaasiyiin rag iyo dumarba leh ayaa madasha uu shirku ka dhacay uga duceeyey dhamaan intii wax ku noqotay qaraxii ka dhacay magalada Bulo Burde oo ay dhaawac iyo dhimasho ka soo gaartay ciidamada Hiil Walaal iyo kuwa dowlada Soomaaliya.
Inkasta oo aan halkaan lagu soo koobi karin hadaladii wanaaga iyo waanada iskugu jiray ee halkaas laga jeediyey hadane waxaa xusid mudan in si wadajir ah taageero muuqata loogu muujiyey dowlada Federalka Soomaaliya ee haatan wadanka ka talisa oo hadii ay shacabku iska kaashadaan sidii loo taageeri lahaa ay soo deg degeyso horumarka guud ee dalka.
Sikastaba ma ahan markii ugu horeysay ee ay jaaliyadaha reer Hiiraan ee qurbaha iskugu yimaadaan shir noocaani oo kale waxaana dhawr isbuuc ka hor sidan oo kale iskugu yimid jaaliyada Hiiraan ee Kenya iyo kuwa Mogdishu oo dhamaantood lagu casuumay siyaasiyiinta ka soo jeeda Hiiraan.
· admin on March 30 2014 23:42:40 · 0 Comments · 1406 Reads ·
14,612,054 unique visits